I-CBD Amafutha Omqubuko | Izixazululo ezihamba phambili ze-CBD ngo-2020
I-CBD Amafutha Omqubuko
Yini ebangela izinduna?
Ungayisebenzisa Kanjani i-CBD Oil for Acne
Ngabe U-CBD Uwaphatha Kanjani Umqubuko?
Izinduna zingesinye sezimo zesikhumba ezithinta izimpilo zentsha eningi, kepha ngisho nalabo bethu abangasekho ebusheni bayamangala ukuphuma ngezikhathi ezithile.
Izinkinga zesikhumba ezifana nezinduna zisenza sisebenzise izinto zamakhemikhali ukuzama ukuqeda ama-zits. Kepha lezi zinto kaningi zibangela ukucasuka okuqhubekayo esikhunjeni. Kodwa-ke, kukhona into engokwemvelo engaba yimpendulo kule nkinga yesikhumba.
I-Cannabidiol noma i-CBD yaziwa kakhulu njengenye yezakhi ezingaphezu kwekhulu ezibizwa ngama-cannabinoids ezikhona ezitshalweni ze-Cannabis Sativa. ICannabidiol yaziwa kakhulu ngezindawo zokulwa nengcindezi, ukulwa nokukhathazeka, ukulwa nokuvuvukala, kanye nezindawo zokuqeda ubuhlungu.
Ngokungafani ne-tetrahydrocannabinol noma i-THC eyaziwa kangcono, eyi-cannabinoid esebenzayo kwensangu, i-cannabidiol ayinayo imiphumela ye-psychoactive, okungukuthi, ayisoze yakwenza ube phezulu, noma ngabe uthatha malini.
Esikhundleni salokho, le nto emangazayo kufanele ibe nezinhlobonhlobo zezinzuzo zezempilo, ngenxa yokuhlangana kwayo nohlelo lomzimba olwalungaziwa eminyakeni engama-30 edlule.
Uhlelo lwe-endocannabinoid (ECS) uhlelo lokutshengisela olukhona ezilwaneni ezincelisayo, ezilawula imisebenzi ehlukahlukene yomzimba, kufaka phakathi ukudla, inkumbulo, ubuhlungu, imizwa, nokunye okuningi. Futhi konke okunikela kwi-homeostasis noma ibhalansi yezempilo. Umzimba wethu udala ama-endocannabinoids, angama-neurotransmitter athumela imiyalezo kuma-receptors emzimbeni wethu ukwenza isenzo.
Ngandlela thile emangalisayo, ama-phytocannabinoids akhona esitshalweni se-cannabis Sativa alingisa umsebenzi wama-endocannabinoids. Ama-cannabinoids afana ne-cannabidiol noma ilebula elimhlophe i-CBD zixhunyaniswe nezinzuzo ezahlukahlukene zezempilo futhi kungaba yisixazululo kubantu abaphethwe yizinkinga zesikhumba njengenduna.
Umzimba wethu ukhipha into enamafutha ebizwa nge-sebum ngezindlala ezibusayo ngaphansi kwesikhumba. Inhloso ye-sebum ukugcina isikhumba sithanjisiwe nokuvikela ukuthi singomi. Le sebum ihamba ngezintambo zezinwele futhi iphume iye kuma-pores.
Kepha kanye ne-sebum, izintambo zezinwele nazo zikhipha amangqamuzana esikhumba afile emzimbeni. Lapho kunamaseli amaningi we-sebum nesikhumba, ama-pores angavaleka. Lokho kwakha amagciwane amaningi, adala izindawo ezivuthayo esizazi njengezinduna.
Phakathi kwezimbangela zalokhu ukuthi kwenzeke, singathola:
Ama-pores avalwe amaseli wesikhumba afile: Amaseli amaningi kakhulu esikhumba afile akhishwe ngasikhathi sinye angadala ukwakheka kwamaseli kanye ne-sebum ukunamathela ndawonye nokuvala izimbobo.
Sebum eyeqile: I-sebum eyeqile ingavimba ama-pores, yenze isikhumba se-grease, futhi ikhiqize uwoyela owedlulele esikhunjeni, okuzoholela kuzits nezindawo.
Amagciwane angeqile: Lapho ukuvinjelwa kwesikhumba kwenzeka, amabhaktheriya akhona esikhunjeni azokhula, ahlanganiswe ne-sebum futhi aholele ekuvukeleni.
AmaHormone Eqile: I-testosterone iyanda ngesikhathi sokuthomba ebangela ukuthi izindlala ezinesibindi zikhulise futhi zikhiqize i-sebum eningi.
I-CBD Facial & Acne Acashile
Kunezindlela eziningi zokufaka uwoyela we-CBD emzimbeni wakho futhi uwenze usebenze. ngakho-ke ingangena emsebenzini. Zonke izindlela zizokwenza lokhu kuhlangana kuhlanganyele nama-receptors emzimbeni wakho ukuze kuveze umphumela, kepha esimweni esithile senduna, izihloko ziyizinqumo ezikhethwayo.
Kunezinhlobonhlobo zama-cream, lotions, serum, nama-balms aqukethe amandla ahlukile we-cannabidiol. Uwoyela we-CBD uvuleka kakhulu futhi ungangena kalula esikhunjeni kwizindlala ezibusayo. Izihloko ze-CBD, ikakhulukazi ezenziwe nge-hemp ziyindlela engcono kakhulu kubantu abaphethwe yinduna ngoba uwoyela wembewu we-hemp uqukethe nama-amino acid abalulekile.
Ama-capsules ayindlela elula nephumelelayo yokuthatha uwoyela we-CBD. Ziza ngamandla ahlukahlukene futhi imiphumela yazo ifinyelela emahoreni angu-8.
Ukuvungula izimbali noma i-e-liquid kunikela ngemiphumela esheshayo ngoba umhwamuko uya ngqo emaphashini bese usuka lapho uye egazini ngokuncipha kwamaphaphu. Ama-vaporizer ashisa umkhiqizo kunokuwushisa, ngakho-ke akukho zinto ezinobuthi ezizongena emzimbeni wakho.
Amaconsi athathwa ngokuncanyana. Zitholakala ngamandla ahlukahlukene, i-hemp-kuphela ye-terpene-infused futhi iza ngezinhlobonhlobo ezahlukahlukene.
Kubantu abangase bangathandi / babekezelele ukunambitheka kwe-CBD tincture kawoyela, i-CBD iyatholakala ngendlela yokudla, iziphuzo, kanye nokudla okulula. Ukudla okudliwayo kwe-CBD kukunika isilinganiso esihlala amahora angama-8. Ungenza ngisho nokudla okudliwayo ekhaya usebenzisa izithako zokuthambisa.
Isenzo se-CBD ku-ECS yesikhumba siyamangalisa njengesitshalo esivela kuso. Phakathi "kwezenzo zokulwa nezinduna" ze-CBD, singasho:
I-CBD kuthiwa ivimbela isenzo se-lipogenic se-endocannabinoids anandamide ne-2AG, esikhiqizwa kwizindlala ezisabekayo futhi sisebenza kuma-CB2 receptors, sibhekele ukukhiqizwa kwe-sebum ngokweqile. I-CBD ilawula ukukhiqizwa kwe-sebum.
Amafutha e-CBD anemiphumela ephawulekayo yokulwa namagciwane, futhi angaqeda amabhaktheriya azungeze indawo yokutheleleka.
Imiphumela yokulwa nokuvuvukala kawoyela we-CBD ivimbela ama-ejenti e- "pro-acne" ekukhuleni kwamazinga e-cytokine ahlasela ukuvuvukala.
Ingabe i-CBD iyasiza ngezibazi zomqubuko?
Amafutha e-CBD aphezulu afakwa uwoyela we-hemp anezinto zokuphulukisa ezithuthukisa ukubukeka nesimo sesikhumba uma sisetshenziswe kabili ngosuku okungenani izinyanga ezintathu.
Ingabe i-CBD isebenza kumqubuko womzimba?
Amafutha e-CBD kuthiwa asebenza nangezinduna zomzimba. Ukuphuka kungenzeka entanyeni, emahlombe, emuva, nasesifubeni ngoba lezi zindawo ziqukethe izindlala ezibushelelezi kakhulu kunawo wonke umzimba.
I-CBD inganciphisa ukukhishwa kwe-sebum okudala ukuvaleka okuholela kuma-zits. Kuphinde kwehlise inani lamagciwane ahlangana endaweni yokutheleleka futhi kunciphisa ukuvuvukala okuhambisana nakho.
Ingabe i-CBD Ingasiza Ngezinye Izinkinga Zesikhumba?
Isikhumba, okuyisitho esikhulu kunazo zonke emzimbeni, siqukethe uhlelo lokusayina lwamangqamuzana e-ECS ngaphakathi kwalo. I-CBD ibonakele ukuthi iyasebenzisana nayo. Imiphumela elwa namagciwane, i-antioxidant, anti-microbial, ne-anti-inflammatory imiphumela ye-CBD isiza ukulinganisela impilo futhi ingasiza ekunciphiseni / ekunciphiseni ezinye izimo zesikhumba ezifana ne-psoriasis, i-dermatitis, nesikhumba esomile nesiluma.
Ngenkathi ucwaningo lusaqhubeka, i-CBD ikhonjiswe ukuthi inamandla amakhulu okwelapha izimo zesikhumba eziningana, kufaka phakathi induna, ngokunciphisa ukukhiqizwa kwe-sebum nokuvuvukala, nokususa amagciwane
Ayikho enye i-anti-acne agent eqhathanisa ne-CBD ngokusebenza kwayo. Akugcini lapho kepha le cannabinoid ikhombise ukubekezelelana okuphezulu kubantu futhi ayicasuli isikhumba.
Izinduna nezinye izimo zesikhumba akufanele zithinte izimpilo zethu ngendlela engeyinhle ngokweqile, kepha lapho ziqala ukuthinta impilo yethu yengqondo, sekuyisikhathi sokubheka isisombululo semvelo njenge-CBD.
PreviousPost Previous:I-CBD, iCORONA VIRUS NOMUNTUOlandelayoPost Next:Kumele ube Nemikhiqizo Yokunakekelwa Kwesikhumba ye-CBD uma uhlala eNew York